October 19, 2019 by aminawehelie
SABTI, October 19th 2019 (AMW) Booliska federaalka Awstareeliya, ayaa shaaca ka qaaday in eey xireen nin u dhashay dalka Ciraaq oo lagu tuhunsan yahay in uu ku lugyeeshay, geerida dad magangelyo doon ahaa.
Sanadkii 2001-dii, ayaa dad ka badan 350 qof oo badankood ka yimid dalalka, Ciraaq iyo Afgaanistaan, si sharci darro ahna lagu daabilayey ay geeriyoodeen, waaana boolisku sheegeen, in ninkaan oo 43 jir ahi laga soo dajiyey garoonka diyaaradaha ee Brisbane ee Awstereeliya, isagoo laga soo musaafuriyey dalka New Zealand.
Taliyaha booliska Reece Kershaw, ayaa tibaaxay, in ninkaan oo ka mid ahaa mukhalisiin manaxayaal ahi oo adka dushooda ka ganacsanayey, eey tahay in cadaalada la hor geeyo, si dadkii dhintay oo ay geeridooda u sabab ahaayeen loogu raadiyo caddalad.
Haddii lagu helo dambiga loo heysto, wuxuu wajahayaa ninkan reer Ciraaq, ugu yaraan 10 sanno oo xarig ah.
Previous British Parliament LIVE
Next Suxufi reer Kurdistan ah, xaaskiisa iyo wiil yar oo ay dhaleen oo geeriyooday.